के नेपाल ‘बनना रिपब्लिक’अर्थात् ‘केरा गणतन्त्र’ हुँदैछ ? - Sidha News
के नेपाल ‘बनना रिपब्लिक’अर्थात् ‘केरा गणतन्त्र’ हुँदैछ ?
आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक बहसमा बारम्बार आउने शब्द हो ‘बनना रिपब्लिक’ अर्थात् ‘केरा गणतन्त्र’ । यो नामको संसारमा कुनै राज्य छैन तर पनि यसको बारेमा बेला–बेलामा बहस हुने गर्दछ ।
सन् १९०४ मा अमेरिकी विद्वान् ओ हेनरीले ‘क्यावेजेज एण्ड किङ्ग्स’ नामक आफ्नो पुस्तकमा पहिलो पटक यो शब्दको प्रयोग गरेका थिए । मध्य अमेरिकी देशहरूमा बस्दा त्यहाँका मुलुकहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा उनले होण्डुरसलाई ‘केरा गणतन्त्र’ को संज्ञा दिएका थिए । यसै सन्दर्भबाट ‘बनना रिपब्लिक’ शब्दको प्रयोग आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा हुन थाल्यो ।
(आशिष भुर्तेल कानून तथा राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)